Ihe 4 P nke Nchọpụta Nchọpụta Ọgbara Ọhụrụ | Martech Zone
SEO ụwa na-ama jijiji na akụkọ ahụ Moz na-egbutu ndị ọrụ ya na ọkara. Ha na-ekwu na ha na-agbada site na iji nlebara anya na nchọta. Ha abụrụla ndị ọsụ ụzọ na ndị mmekọ dị mkpa na ụlọ ọrụ SEO ọtụtụ afọ ugbu a.
Echiche m abụghị nwee nchekwube maka ụlọ ọrụ Organic Search, na echeghị m na ọ bụ ebe Moz kwesịrị ịbawanye okpukpu abụọ. Ọ bụ ezie na Google na-aga n'ihu na-ewulite ihe ziri ezi na nsonaazụ ọma site na ọgụgụ isi na algorithms a nụchara anụcha, ihe ndị chọrọ maka ịnweta ndị na-ahụ maka ọchụchọ na ndị ọrụ ga-apụ. Na SEO ngwaọrụ na-apụta kwa izu nke na-ama ndị dịka Moz.
Afọ ise gara aga, a ọtụtụ n'ime anyị ịzụ ahịa emere mgbalị niile na SEO. Anyị nwere ndị nyocha SEO anyị. N'aga n'ihu 5 afọ na anyị ahu nagide kediegwu toolets si anyị na onye nkwado na ggbanwe nke na-enye nghọta n'ime ọnụọgụ weebụ anyị niile, ọ bụghị naanị nyocha anyị. Jikọtara na nchịkọta na webmasters, gShift's solution na-enyere anyị aka ileba anya na mbọmịkị anyị na-azụ ahịa omnichannel, gụnyere arụmọrụ nke organic, na mgbakwunye na nyocha mmetụta, nchọpụta ọdịnaya, nyocha akara, na ọtụtụ ndị ọzọ
SEO abụghị ụlọ ọrụ ọzọ; ọ bụ akụkụ nke ụlọ ọrụ. Ọ bụ atụmatụ na ikpo okwu. Ọ bụ ụzọ n'ime usoro ịzụ ahịa dijitalụ. Achọrọ ihe ọmụma maka marketer ọ bụla, ọ bụghị ọnọdụ nke ya. Onye ọ bụla na-ere ahịa kwesịrị ịghọta otu esi ewepụta injin ọchụchọ ya na atụmatụ zuru oke ma ghọta ebe ọ dabara n'ụwa anyị niile. Ruo ogologo oge, anyị elelela ka ụlọ ọrụ SEO na nyiwe na-efu ụgbọ mmiri na njikarịcha ntụgharị, ide ọdịnaya dị ukwuu, na nurturing na-eduga na ntụgharị. Ruo ogologo oge, ụlọ ọrụ SEO anọwo na backlinks, Keywords, na ọkwá ebe ndị ahịa na ndị ọrụ ọchụchọ na-aga n'ihu.
Ndị ọkachamara ga-ekwenyeghị m, mana anyị nwere ọtụtụ narị ndị ahịa na-eme nke ọma na emelitere anyị. Ọ bụ ezie na anyị ka na-ahụ na saịtị ndị ahịa anyị ka ewuru site na ndụmọdụ Google ma anyị na-aga n'ihu nyochaa ogo, ọ bụghị ebe anyị na-etinye ọtụtụ mbọ anyị ọzọ. Abụ m ọ bụghị na-ekwu SEO bụ adịghị mkpa, ọ ka bụ ọwa bụ isi maka nnweta. Ana m ekwu na itinye ego na SEO agaghị enweta nloghachi nke usoro ndị ọzọ. Atụmatụ ndị ahụ bụ nkwalite mmekọrịta mmadụ na ibe ya, nkwalite akwụ ụgwọ, mmekọrịta ọha na eze na iwulite ọba akwụkwọ ọdịnaya.
Nkwalite mmekọrịta - Gị atụmanya na ahịa na-adịghị eleta gị na saịtị ugboro ugboro. Agbanyeghị, ha na-eme mmekọrịta ọha na eze. Iji jikọọ ebe atụmanya gị na ndị ahịa gị, ị ga-akwalite ọdịnaya gị ebe ha nọ. Ndị mgbasa ozi mgbasa ozi ahụ na-ekwukarị ndị ọhụụ ọhụrụ, ndị na-atụle anyị na ịntanetị, na-ewulite ikike ịchọ njikwa anyị.
Otiongwọ nkwalite - Ọ bụ ezie na anyị ga-enwe mmasị na WOM na ịkekọrịta ọdịnaya iji gbasaa iru nke ụdị anyị, eziokwu dị mfe bụ na mgbasa ozi bụ akwa anyị ga-etinye na ya iji gbasaa iru ahụ. Ohere ndị ahụ akwụgoro na-abịakarị ndị na-ege ntị ọhụụ, ndị na-atụlezi anyị na ịntanetị, na-ewulite ikike ịchọ ọrụ anyị.
Mmekọrịta ọhaneze - Inwe otu ndị ọkachamara na-achọ ohere iji kpọsaa aha gị na nka gị bụ ihe dị mkpa. Isiokwu ndị sitere na mbipụta ndị dị mkpa, ajụjụ ọnụ na pọdkastị, yana ohere ikwu okwu anyị na-enweta site n'aka otu ndị ọrụ anyị mepụtara ihe dị mkpa, ikike dị elu kwuru na anyị ga-enweta ikike ọchụchọ.
Akwụkwọ Ọdịnaya Premier - Evergreen ọdịnaya anaghị enyere onye ọ bụla n'ime ndị ahịa anyị aka ọzọ. Ihe ederede zuru ezu na nyocha, imewe, ihe omimi di omimi, infographics, na akwukwo ocha na enweta otutu traction. Kama ilekwasị anya na mmepụta ọdịnaya, anyị lekwasịrị anya n'ịrụpụta ọbá akwụkwọ ọdịnaya zuru oke maka ndị ahịa anyị ọ bụla.
Enwere ndị ọzọ? Ee n'ezie. Ndị na-emepụta ọdịnaya ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ asọmpi siri ike ka nwere ike ịnwe oke Nchọpụta Nchọpụta Nchọpụta. Mee otutu nde peeji ba uba ma nwekwaa ezigbo ndozi na itinye ego. Mana ụlọ ọrụ ndị ahụ bụ ndị ọzọ, ọ bụghị iwu. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ụlọ ọrụ achụmnta ego ga-aka mma ma ọ bụrụ na ha etinyekwu ego na ụkpụrụ anọ ndị a dị n'elu.
Tags: njikọ azụKeywordsikeakwụ ụgwọ nkwalitepremier ọdịnayapremier ọdịnaya mmepụtammekọrịta ọhanezeAnkwalite mmekọrịta mmadụ na ibe ya-acha ọcha akwụkwọAkwụkwọ edemede
Septemba 7, 2016 na 1:58 ehihie
Nchịkọta na-adọrọ mmasị, daalụ.